Ungachinja sei zita reApple Watch | Ndinobva mac
Ungachinja sei zita reApple Watch yedu
Chokwadi vazhinji venyu munotoziva kuti zita reiyo Apple wachi inogona kuchinjirwa kune iyo yatiri kuda uye iri zita ndiro rinozoratidzwa mukubatanidza kweBluetooth nevamwe. Kuti tishandure zita reApple Watch yedu, isu tinongofanirwa kuteedzera mashoma matanho ari nyore muWatch application.
Kazhinji kubatanidza Apple Watch ne iPhone inokonzeresa zita rekusarudzika reiyo imwechete kana kunyangwe Apple ID kuti iiswe, asi zita iri rinogona kuchinjirwa kuchinhu chero chatinoda uye nhasi tichaona kuti tozviita sei.
Aya ndiwo mashandurirwo ezita reApple Watch yedu
Nyore, nekukurumidza uye yakapusa. Kuchinja zita reiyo wachi kuri nyore uye isu tine nzira mbiri dzekuzviita, chekutanga chiri kuchinja zita reiyo iPhone iyo iyo Apple Watch yakabatana uye imwe yacho kuchinja zita reiyo wachi zvakananga kubva kuWatch application. . Ngatione kutanga chinja zita kubva kuapp.
Isu tinopinda muApple Watch app
Ipapo isu tinopinda iyo Ruzivo menyu uye isu tichaona Zita
Ipapo chaipo unogona chinja zita rewachi riite iro ratiri kuda, unogona kunyange kuwedzera zvimwe zviratidzo, emojis kana kunyange Apple logo. Asi isu tine imwe sarudzo kana tichida kushandura zita rayo uye izvi kuzviita zvakananga kubva kuzita reiyo iPhone, hongu, kuchinja zita re iPhone yedu kuchachinja zita reApple Watch. Kune izvi isu tinongofanirwa kuenda ku Zvirongwa> Zvekare> Ruzivo> Zita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ungachinja sei zita reApple Watch yedu
MacOS Mojave inotibvumidza kugovana mapassword kuburikidza neAirDrop
Forecast Bar inogadziridza macOS kune vhezheni 4